Apple ayaa siisay wax lala yaabo waxayna bilawday iCloud + WWDC 2021 | Wararka IPhone
Waqtiga WWDC 2021 sidoo kale waxaa loo hibeeyay iCloud iyo Apple ID. Laba ikhtiyaar oo cusub oo aqoonsi Apple ah ayaa lagu dhawaaqay. Midkoodna loogu talagalay gal koontadaada markaad ilowdo furahaaga sirta ah iyo mid kale oo macluumaadkaaga uga taga dhaxal ahaan markaad dhimato. Sidoo kale waa la soo bandhigay iCloud + un xirmo ka kooban saddex adeeg oo cusub oo lagu daray qorshayaasha hadda socda ee iCloud la xiriira asturnaanta internetka.
Ammaan badan iyo asturnaan badan oo leh waxyaabo cusub oo iCloud + ah
Aqoonsiga Apple ayaa fursad loo siiyay ku wareejiso kontoroolka koontadayada qoyska ama saaxiibbada si markaa, ay dhacdo geeri, waxaan siin karnaa dhammaan macluumaadkayaga iyo inay maamuli karaan. Intaa waxaa dheer, ikhtiyaar kale ayaa la soo saaray si loo soo celiyo lambarka sirta ah ee koontadeena markaan xasuusanno, iyadoo lagu darayo dad u dhow inay markhaati ka yihiin koontadayada.
Sidoo kale waa la soo bandhigay iCloud +, oo ah adeegyo isdaba-joog ah oo lagu daray diiwaangelinta hadda la bixiyo taasina ma kordhinayso qiimahooda. Kuwani waa astaamaha cusub:
Relay Gaarka ah: nooc gaashaan dalwad ah oo kuu oggolaanaya inaad si badbaado leh oo qarsoodi ah uga baarto internetka. Sameynta codsiyadaada dalban ayaa lagu kaydiyaa meel kasta oo aad tagtid.
Qari Emailkeyga: qari cinwaanka emaylkaaga shakhsi ahaaneed adoo abuuraya emayl kala duwan oo aan kala sooc lahayn oo u jeedsanaya midkaaga gaarka ah.
HomeKit Amni Video: soo bandhig kaamirooyinka aan xadidnayn si aad uga dhex aragto HomeKit lagu dhisay iCloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » Apple ayaa siisay wax lala yaabo waxayna bilawday iCloud + WWDC 2021